China 5 matanda A5 Kucheka Mat, 661A5, Kuzviporesa wega Kucheka mat Kugadzira uye Fekitori | Allwin
Self kuporesa A5 kucheka mat fekitori yakananga
Iyo yekucheka bonde ndechimwe chezvishandiso izvo vatambi vemuenzaniso vanofanirwa kushongedza;
KUKONZESA KUZVIPORESA: Kunoshamisa kwekuzvirapa kugona kunoita kuti kucheka kupere kunyangarika uye kudzokorora kucheka hakukanganisike, kuchengetedza nzvimbo inotsvedzerera uye kuwedzera hupenyu hwepad uye yekucheka blade.
In Inches & cm, Yakapetwa kaviri-Sided: Ese maImperial uye Metric magwara ndiwo akanyanya kudhindwa anodhinda, kuve nechokwadi chakarurama kutemha uye yepamusoro mhando basa nguva dzese.
UNHU HUNOKOSHA: Isingafungidzire, isina kutsvedza, uye ine mukurumari wakanyanya kune banga. Iyo ukobvu hwe3mm inoita kuti ive gobvu uye yakasimba. Kuchinja kwakasimba uye kugadzikana kwakanaka, kuitira kuti igone kukotama pakuda.
ZVAKAWANDA ZVINOGONESESA: Iyi yekucheka mat Inokodzera mhando dzese dzekunyora uye kupenda, handcraft pad, yekuveza bepa, yakaipa firimu yekucheka, Mapepa ekucheka, nezvimwewo Iyo inogona zvakare kushandiswa seye mbeva mbeva, uye inodikanwa kune vadzidzi, mhuri uye mahofisi. .
Yakakwira Hunhu Hwemhando Isingaruki: Unogona kunzwa zvakanaka nezvekushandisa nhete yekucheka bonde inopesana nekukombama. Inoita chipo chakakura chevadzidzisi, vagadziri uye vanofarira quilters.
Item Model Nhamba 661A5
Item Kurema 0.16kg pachidimbu
Chigadzirwa Zviyero 8.7 x 5.9 x 0.12 inches / 22 x 15 x 0.3 cm
Saizi (Yakatarwa.) A5
Garandi & Tsigiro;
Chigadzirwa garandi: Chaizvoizvo hakuzove neanotevera-kutengesa dambudziko, isu tinoshingairira kubata chero mushure-kutengesa matambudziko uye Tsigiro mushure mekutengesa kwezvigadzirwa 1 makore.
Pashure: 5 akaturikidzana A4 Kucheka Mat, 661A4, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Zvadaro: 3 akaturikidzana A1 Kucheka Mat, 883A1, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Kucheka bonde reCricut, 9912, 12 ″ x12R ...